တိုင်းပြည်နိုင်ငံကနေခရီးသွားလာ, သို့မဟုတ်မြို့မြို့မှ, ရထားကအမှန်တကယ်အံ့သြဖွယ်အတွေ့အကြုံနှင့် Voyages ဤသို့ပြုဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဥရောပရထား ပုံမှန်အတိုင်းအကြီးအကျယ်ခရီးထွက်အကွာအဝေးအပေါ်အခြေခံထားတယ်, သို့သော်, airfares နဲ့တူ - ပါ - ခဝယ်လိုအားပေါ် မူတည်. အတက်အကျနိုင်သည့်အတွက်များစွာဥရောပရထားလမ်းကုမ္ပဏီများမှယခုအခါပြောင်းလဲနေသောစျေးနှုန်းစနစ်ပြောင်းရွေ့ခဲ့ကြ, ကန့်သတ်, သို့မဟုတ်သင်ဝယ်ယူဘယ်လိုအစောပိုင်း. သငျသညျသြစတြီးယားသွားရန်စီစဉ်ထားခြင်းရှိမရှိ, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, သို့မဟုတ်အီတလီ, သင့်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအနည်းငယ်သုတေသန ရထားခရီး တကယ်ကသင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုဆန့်ကိုကူညီနိုင်. ဤတွင်များမှာ ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များ အပေါ် ရထားကိုပုံမှန်အတိုင်းအပေါ်ပိုက်ဆံကယ်ဖို့ကိုဘယ်လို သင့်ရဲ့ခရီးသွားမှတ်တမ်းစဉ်အတွင်း.
မရရှိနိုင်ခဲ့လျှင်, ကြိုတင်ရထားလက်မှတ်တွေပုံမှန်အားဖြင့်ရောင်းချအပေါ်သွားပါ6ရှေ့ဆက်နယ်လှည့်အချိန်လအတွင်း. သို့သျောလညျး, ဘွတ်ကင်တောင်မှပဲရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲမတိုင်မီနေဆဲတတျနိုငျသ သင်တို့ကိုကယ်တင် ပိုက်ဆံတစ်လုံလောက်သောငွေပမာဏကို, ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မဆိုမဖြုန်းတီးပါနဲ့!
သင်တို့သည်ဤလအတွင်းပြင်ပသွားလာရန် option ရှိပါက, လက်မှတ်တွေဝယ်ဖို့အများကြီးစျေးသက်သာနိုင်ပါတယ်. လည်း, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အားလပ်ရက်ကာလ ခရစ္စမတ် နှင့် အီစတာပှဲတျော, အထွတ်အထိပ်ကြိမ်များမှာ - ဘယ်အချိန်မှာစစ်ဆေးပါ ကျောင်းကအားလပ်ရက် အပေါ်ဖြစ်ကြပြီးထိုအကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစား.
သငျသညျအစဉျအမွဲသာသင်၏ဝယ်ယူမှုကိုဖန်ဆင်းပြီးနောက်ခမကြာမီကျဆင်းသွားကြောင်းကြည့်ဖို့ရထားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်ဖူး? ရထားလက်မှတ်စျေးနှုန်းများမှာအတက်အကျရှိသည် – မကြာခဏထိုနေ့ရက်တွင်. ကုမ္ပဏီ၏ဖျက်သိမ်းခြင်းမူဝါဒအပေါ်မူတည်ပြီး, သင်အတွင်းပြုမူလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်နိမ့်မှုနှုန်းမှာ cancel နိုင်နှင့် re-စာအုပ်ဆိုင်ကသင်၏ရထားဖြစ်သင့် 24 သင်၏မူရင်းဝယ်ယူနာရီ.
အချို့သော ဥရောပရထားလမ်းကြောင်းများ သားသမီးတို့အဘို့သိသိသာသာဈေးလျှော့ပူဇော်, ကျောင်းသားများအတွက်, နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများခရီးသွားများအတွက်. သုံးကျိပ်တပါးမှအသက်ထံမှကလေးများယေဘုယျအားဖြင့်ပယ်ကောင်းတစ်ရာခိုင်နှုန်းအရ, ၏နှစ်အောက်ကလေးများအနေဖြင့်3ပုံမှန်အားဖြင့်အခမဲ့ခရီးသွားလာ. သင်သွားနေသောရထားများနှင့် ဦး တည်ရာပေါ် မူတည်၍ ကျောင်းသားများနှင့်အကြီးတန်းအထူးလျှော့စျေးများကိုရရှိနိုင်ပါသည်. သင်တစ်ဦးလျှော့လက်မှတ်ဝယ်ယူလျှင်ခပ်သိမ်းသောကာလသင်သည်ပေါ်တွင်သင်၏ကျောင်းသားသို့မဟုတ်အကြီးတန်းကဒ်ရှိသည်ဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-save-money-on-train-fares%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)